Taariikhda Burburka Somaliland (Qaybihii oo dhan) - Boga Wise Man
April 21, 2021 qawdhan
Wax is bedelay mooyee markaliya uunbaa waxa bilaabmay sanadihii 2014 iyo 2015 olole ay wasiirada Somaliland ku macneeyeen inuu yahay inay soo jiitaan maalgashi shisheeye. Illeen waxa heshiiskii Turkey ku jiray “inaan la carqaladaynin wixii maalgashi ah”. Waxay socotaba waxay dawlada Imaaraadka ee xidhiidhka sokeeye leeyihiin Cumar Cabdirashid Cali Sharma’arke.
Markay halkaa marayso ayay toos u cadeysteen hay’adihii ujeedadooda dhabta ah. Waxa ay keeneen xeerar ka hor imanaya diinta Islaamka oo ay ku sheegayaan inay xuquuqda dumarka ku illaalinayaan. Waxa soo baxay siyaasiyiin la xulufo ah ajnabiga oo ku baaqa in xidhiidho lala sameeyo Israel.
Wise Man – 2020
DP World Hargeisa Somaliland UAE
Previous Post Taariikhda Burburka Somaliland – Qaybtii Shanaad